Buy အဝေးကြည့် မှန်ပြောင်း 40X60 (1500/9500M) (23,000Ks) in ဗဟန်း on ipivi.com
အဝေးကြည့် မှန်ပြောင်း 40X60 (1500/9500M)
ပါဝင်မယ့်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ တစ်ကယ်ကိုလိုလေးသေးမရှိအောင် ဖြည့်တင်းပေးထားတယ် ခင်ဗျ ... မှန်ဘီလူးကိုသုတ်ဖို့ ပုဝါလေးပါမယ် ... ဖုန်းမှာတပ်ပြီး တွဲရိုက်လို့ရအောင် ဖုန်းဖြင့်တွဲသည့် ကလစ် ... ထည့်ပြီးတော့ ခါးမှာချိတ်လို့ရအောင် ခါးချိတ်အိတ် ... အမှတ်တမဲ လက်ထဲကပြုတ်ကျသွားတာမျိုးကို မစိုးရိမ်ရအောင် လက်ကိုင်ကြိုးကွင်း ... တောထဲတောင်ထဲ အသုံးချလို့ရမယ့် သံလိုက်အိမ်မြှောင် ... ထိပ်နောက်မှန်ဘီလူးတွေကို ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးထားမယ့် မှန်ပိတ်အဖုံး .. ဒေါက်နဲ့ ထောက်ပြီး ရိုက်လို့ရအောင် (၈) လက်မ ဒေါက်တစ်ချောင်း .. ကဲ ဘယ်ေလာက်ပြည့်စုံပြီး စေတနာပါလိုက်သလဲ ဆိုတာ ...
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဖုန်းလေးနဲ့ တွက်ဖက်ပြီး အသုံးပြုလို့ရမယ် ... တွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ ... အလှအပရှုခင်းတွေ ... ဘ၀ခရီးမှတ်တမ်းတွေ ... အကောင်းဆုံး ရိုက်ယူနိုင်မှာပါ ... ဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာ နေရာသိပ်မယူပဲ အိတ်ဆောင်အမြဲသယ်သွားနိုင်တာပေ့ါ ... အလေးချိန်ကမလေးတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ 280g သာရှိတယ် .....
ဖုန်းနဲ့တွဲရိုက်ဖို့ကလစ်ကလည်း ရှာနေစရာလည်း မလိုဘူး ... တစ်ပါတည်း ပါပြီးသား ... အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တွေကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်တာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ... ဥပမာ ရှိုးပွဲသွားကြည့်တဲ့အခါမျိုး အနီးကပ်မြင်တွေ့ခြင်လား ??? မြန်မာဘောလုံးပွဲ သွားကြည့်တဲ့အခါမျိုး ကြည့်ရတာအဆင်မပြေ မမြင်ရ ဖြစ်နေသလား ??? လုံးဝကို အဆင်ပြေစေရမယ်လို့ အာမခံပါတယ် ...
အကြည်လင်ဆုံးရုပ်ထွက်တွေရရှိအောင် ချိန်ညှိုနိုင်မယ့် Manual Adjust လုပ်လို့ရမယ့် လှည့်ချိန်စနစ် ၂ မျိုးပါဝင်ပါမယ် ... အရှေ့ရော ... အနောက်ရော 40X60 ချိန်နိုင်မှာပါ ... ၁၅၀၀ မီတာကနေပြီးတော့ ၉၅၀၀ မီတာအတွင်းကို စိတ်ကြိုက်ချိန်နိုင်ပါတယ် ... ကိုယ့်ရဲ့ မြင်ကွင်းအနီးအဝေးပေါ်တော့ မူတည်တာပေ့ါ ခင်ဗျ ...
ဖုန်းနဲ့တွဲရိုက်ဖို့ပဲ မဟုတ်ဘူးနော် ... သူ့ကြီးပဲလဲ အလွတ်တန်း ကြည့်နိုင်ပါတယ် ... ပုံမှန်မှန်ဘီလူးတစ်ခုလိုပေ့ါ ... အဆင်ပြေတာပေ့ါ ... ဖုန်းနဲ့လဲ တွဲသုံးနိုင်မယ် ... အလွတ်လည်း သုံးနိုင်တယ် ... အခုခေတ်က လူတိုင်းဖုန်းကိုင်တဲ့ ခေတ် ... ဒါလေးနဲ့သာ တွဲလိုက်ရင် ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတွေကို ရိုက်ယူထားလို့ ရပြီပေ့ါဗျာ ...
အမည်: အဝေးကြည့် မှန်ပြောင်း 40X60 (1500/9500M)